Volom-barotra voajanahary Bads Bulolesale mpamatsy, turquoise | Zh vatosoa
Zh vatosoa - mpamatsy vato burchoise sy fivarotana firavaka firavaka firavaka
0 sakana mitovitovy turquoise
1 Fitaovana henjana
2 Beads turquoise
2-1 turquoise boribory boribory
2-2 turquoise rondelle / baomba ABACUS
2-3 Ball turquoise Ball
2-5 BOAD BADS TURQUOISE
2-9 turquoise sombin-tsofina
2-11 Turquoise Heart Bads
2-12 turquoise turqurop beads
2-13 Bads cross turquoise
2-15 turquoise niatrika vakana
2-16 Turquoise Coin / Bokt Boaks
2-17 Turquoise Pumpkin Bads
2-18 Vary vary
2-19 Turquoise atody atody
2-21 ny lela turquoise
2-22 BOAD BEADS TURQUOISE
2-24 Turquoise Bullet Beds
2-25 Turquoise Slice Bads
2-26 Bads Reck
Cabochon Turquoise 3-1
Kaboketa turquoise Cushion Kabochon
3-6 turquoise rectangle cushion cafochon
3-8 Turquoise Cabochon tsy miova
Turquoise dia nanan-kery Cabochon
Cabochon fo turquoise
Turquoise ny fomba hafa
Fitaovana henjana 6
7 Beads 7
8 Cabochon vatosoa
9 Gemstone voasokitra & firavaka
Volafotsy vavy 10
11 Bangle Bangle
12 fehin-kiraro 12
Kavina 13 kavina
Feno peratra 15
16 Gemstone dia nametaka firavaka
17 ny vatosoa hafa
18 volafotsy / volamena / volamena / charms firavaka
Fitsidihana ny mpanjifa
Turquoise ny sariko
Birao orinasa sy amidy
Turquoise Mine VEdito
Fanamboarana asa tanana amin'ny dingana VEDIO
Production Production VEDIO
Fizarana vato amin'ny fanamboarana vedio
Fanamboarana ny fanamboarana horonantsary dingana
Asehoy ny efitrano vedio
Fa maninona no mividy avy aminay
Isan-karazany ny vokatra premium
Izy ireo dia namboarina araka ny fenitra iraisam-pirenena henjana. Ny vokatra azontsika dia nahazo fankasitrahana avy amin'ny tsena an-trano sy avy any ivelany.
Manondrana any amin'ny firenena 200 izy ireo izao.
Ny vatosoa zh dia mpamatsy vato lehibe amin'ny vato voajanahary sy firavaka gements any Chine mandritra ny 15 taona mahery.
Manokana ny turquoise ny turquoise sy ny turquoise vato sy ny vakana vatosoa, ny vakana boribory, ny sokitra, ny sokitra, ny fehin-kibo, ny kavina, ny kavina, ny kavina, ny pendantiana, ny kavina ary ny saha firavaka sy ny firavaka hafa.
tsara& Fehezanteny firavaka firavaka
Fitambaran'ny zava-kanto nentim-paharazana& Zavakanto firavaka maoderina
Mifantoha amin'ny tanana voajanahary& tena izy
Hentitra tsara amin'ny kalitao amin'ny kalitao, ny fitsaboana, ny famolavolana, ny famolavolana, ny famokarana tsy mety amin'ny fitsapana kalitao& Delivery
Diniho ny anay Vokatra ny vokatra
Ny firavaka rehetra sy ny firavaka gemstone rehetra dia afaka namerina ny fitsapana an'i Gia; Ny karazan-tsambo isan-karazany isan-karazany dia malaza amin'ny tsena iraisam-pirenena; Manome turquoise raw ihany koa izahay.
Zh vatosoa dia ny mpamatsy vato voajanahary voajanahary any Chine nanomboka tamin'ny taona 2010 nanomboka ny fanamboarana firavaka firavaka sy ny orinasam-barotra.
Turquoise sy karazan-javamaniry vita amin'ny vatosoa, cabochons, voasokitra, volafotsy volafotsy 925 setroka
Voajanahary fluorista minimalist dainty endrika endrika takelaka 20 santimetatra avy amin'ny 6-13mm
Volom-bokatra voajanahary 100% ho an'ny firavaka
Voajanahary ny rojo vy amin'ny rojo vy misy rojo vy vita amin'ny tilikambo amin'ny halavany 18 santimetatra avy amin'ny 4-12mm
Ny spiny voajanahary sy ny demimpence rojo vy vita amin'ny rojo vy avy amin'ny 5-12mm halavany 16inch
Voajanahary manify tsy misy turquoise tilikambo fehim-borona 16inch habe 4-8mm
Turquoise Bracelet Bracelet Bracelet Bracelet Bracelet bracelet Sheete Manasitrana firavaka
Voajanahary spiny rojo vy, ny halavany 16inch, ny haben'ny 4mm, 6mm, 8mm, 10mm
Manolotra endrika tsy manam-paharoa izahay mba hahafinaritra ny famoronana firavaka sy hampientanentana ny mpanakanto firavaka. Izahay tsena mora mahatsapa ny fitakiana ary ho mailaka valiny, mifantoka amin'ny fanomezana vola-namboarina vokatra mahomby sy faran'izay tsara mpanjifa.
Hamarino ny baiko henjana, kalitao, habe, endrika, fandeferana, fomba, fomba, asa tanana, fotoana, fotoana fandefasana, fandaharam-potoana fandefasana, fandaharam-potoana fandefasana, fandaharam-potoana fandefasana, fandaharam-potoana fandefasana, fandaharam-potoana fandefasana, fandaharam-potoana fandefasana, fandaharam-potoana fandefasana, fandaharam-potoana fandefasana, fandaharam-potoana fandefasana, fandaharam-potoana fandefasana, fandaharam-potoana fandefasana, fandaharam-potoana fandefasana, fandaharam-potoana fandefasana, fandaharam-potoana fandefasana, fandaharam-potoana fandefasana, fandaharam-potoana fandefasana, fandaharam-potoana fandefasana, fandaharam-potoana fandefasana, fandaharam-potoana. Betsaka ny mpanamboatra unit izay napetraka hiadiana amin'ny fitomboan'ny fangatahana vokatra
Ny fanaovana ny endrika fanaovana sary an-tsary na fomba maoderina mba hanamafisana indroa ny fomba hahatonga ny hafatra marina.
Araho ny hafatra marina mba hanokafana ny modely na hanao ny fanilihana.
Manaova santionany QA mahazatra mba hanamafisana ny entana faobe ny fialana amin'ny kalitao, hanao karatra telo kalitao izahay, izay ho an'ny mpiasan'ny ekipa QC; Ny iray dia natao ho an'ny ekipa QC Customer QC, ny fahatelo dia natao ho an'ny departemantantsika fanamboarana.
Araho ny santionany QA mahazatra QA hanamboarana ny entana be dia be.
Avy iray robina tia hafa.
Ny tenantsika isika amin'ny fifidianana Pride vato miavaka ho an'ny mpamorona ny mankafy.
Shenzhen Hong Zheng Technology Limited Limited dia napetraka nandritra ny 15 taona mahery. Ny orinasa dia manao fandrosoana mitohy ihany koa. Manana ny orinasany manokana izy ary namorona ny marika marika manokana. Mifantoka amin'ny firavaka voajanahary sy tena izy isika. Ny vatosoa zh dia mpamatsy vatosoa marina, manome turquoise henjana sy turquoise avo sy turquoise, firavaka turquoise. Raha mitady firavaka firavaka amin'ny turquoise na mpanome vato be turquoise ianao dia mifandraisa aminay.
Ny vokatra rehetra ao amin'ny orinasantsika (ny turquoise sy ny firavaka gemstone) dia nosedrain'i Gia. Ho an'ny vokatra dia afaka mividy amim-pahatokiana ianao. Ny vakana turnquoise an'ny orinasa dia tena be mpitia ao amin'ny tsena iraisam-pirenena. Manome turquoise tsy voavaly ihany koa izahay.
Taorian'ny 15 taona nanoratana ny 15 taona, ny fizarana sy ny lazan'ny firavaka Zhgems dia nihatsara be, ary ny rafi-pandaminana ara-barotra avo lenta dia nanatsara ny tsy fivadihan'ny mpanjifa. Ny foto-kevitra momba ny firavaka mahazatra tsy miankina dia nampidirina tao amin'ny fahitana ny mpanjifa. Ao amin'ny toerana mitarika eny an-tsena ...
Shenzhen Hong Zheng Technology Limited Limited Perss"Ampifamadiho ny serivisy ara-barotra sy ny fividianana manerantany, ary miezaka ny ho any Shina's Ny orinasa iraisam-pirenena sy orinasa iraisam-pirenena voalohany", miaraka"Iraisam-pirenena momba ny firafitra, ny fitantanana mahomby, ny vidiny voadio ary ny fivoaran'ny mpikambana ao amin'ny ekipa.""Fifandraisana amin'ny mpanjifa mba hahatratrarana fandresena maharitra ela" Raha ny filozofia fitantanana orinasa, mifanaraka amin'ny fitsipiky ny fitoviana sy ny tombontsoam-pitantanana, dia manitatra hatrany ny orinasa ara-barotra isan-karazany, misy vokatra avo lenta, ny vidiny ara-bola, ny fahombiazan'ny haingam-pandeha, ary miezaka ny hihaona amin'ny mpanjifa isan-karazany, natokana ho an'ny mpanjifa isan-karazany, natokana ho an'ny mpanjifa isan-karazany Ny serivisy mafana amin'ny namana tsirairay.
Ny mpanjifa voalohany dia ny zava-drehetra dia mifantoka amin'ny mpanjifa, ho tombontsoan'ny mpanjifa, hanome ny mpanjifa amin'ny serivisy avo lenta, mba hahatsapan'ny mpanjifa ny anarany.
Ampiasao ny takelaka fifandraisantsika amin'ny antsipirihany momba ny antsipirihany momba ny antsipirihany momba ny antsipirihany na hiantsoana anay hiresaka bebe kokoa amin'ity vokatra ity.
Ny vokatra rehetra ao amin'ny orinasantsika (ny turquoise sy ny firavaka gemstone) dia nosedrain'i Gia. Ho an'ny vokatra
Fetim-pianakaviana fatratra ho an'ny firavaka firavaka
Voaporitra voajanahary Black Agate Slab Beads Raw Onyx Gemstone Lava Slice Bead ho an'ny Pendant Rojo 10mm * 45mm * 5mm
Shenzhen Hongzheng Technology Co, Ltd. Natsangana tao Shenzhen, Jona tamin'ny Jona 2010. Ny marika "zhgems" mamorona dia manampahaizana manokana amin'ny famokarana firavaka 11% sy ny firavaka voajanahary sy madio.
Hamaky bebe kokoa>>
Adiresin'ny orinasa: GuangJingtou, Distrika Qingxi, City Dongguan, Sina.
Jereo ny mahagaga, azafady mba andalàna ny mpanjifanay.